Kusolwa umlandeli we-ANC ngokugwazwa kowe-DA | News24
Kusolwa umlandeli we-ANC ngokugwazwa kowe-DA
Durban – Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi ilunga le-Democratic Alliance livule ngemuva kokugwazwa engalweni ngabalandeli beqembu le-African National Congress.
Lo mlisa ona-29 ubudala ulimale ngesikhathi kungqubuzana abalandeli be-DA nabalandeli be-ANC ekupheleni komcimbi we-DA wokugubha usuku lweNkululeko obuhanjelwe abantu abalinganiselwa ku-1500 eWelbedacht.
Okhulumela amaphoyisa uThulani Zwane uthe: “Lesi sigameko senzeke eWelbedacht ngaseChatsworth ngoLwesithathu, kodwa umsolwa uvule icala lokushaya ngenhloso yokulimaza esiteshini saseNtuzuma.
OLUNYE UDABA:I-DA isishayele ihlombe isinqumo senkantolo ngowayeyimeya
“Ulimale engalweni yakwesokunxele futhi kudingeke ukuba aphuthunyiswe esibhedlela ukuze alashwe,” kusho uZwane.
“Ngesikhathi abantu sebehamba kuqhamuke izimoto zilandelana kukhona neveni ebinefulegi elikhulu le-ANC ezifike zavimba indlela yokuphuma nokuyilapho kusuke khona uthuthuva,” kusho owayekhona.